Baadhitaanka HIV waxa uu kuu sheegi karaa inaad qaaday cudurka HIV ama aadan qaadin. Baadhitaankan si la isku halayn karo waxa uu u baadhaa HIV ku jira dhiigaaga ilaa 6 todobaad ka dib gelida khatarta cudurka. Waydii xirfad yaqaanka caafimaadka haddii baadhitaanka hore uu suuragal yahay xaaladaada.
Baadhitaanka HIV waxa uu u dhacaa sida soo socota:
Xirfad yaqaanka caafimaadku waxa uu qaadaa muunada dhiiga oo waxa uu u diraa shaybaadhka wixii ah baadhitaanka.
Gudaha shaybaadhka waxay raadin doonaan barootiinka dhiiga ku jira dhiigaaga
Xirfad yaqaanka caafimaad waxa uu helaa natiijada shaybaadhka baadhista ilaa hal todobaad ka dib.
Xirfad yaqaanka caafimaadku waxa uu kuu sharaxaa adiga oo kaala hadlaa wax ku saabsan tallaabooyinka xiga.
Dhakhtar muunada dhiiga ka qaadaya haweenayda.
La hadalka dhakhtar
Waxaad bilaash kula hadli karta dhakhtarkaaga guud ama xirfad yaqaanka caafimaadka xarunta caafimaadka ee xarunta magan galya doonka Dhakhtar ma siin karo macluumaad adiga kugu saabsan qof kale. Isaga/ iyadda waxaa sharcigu ku waajibayay inay tixgeliyaan gaar ahaanshahaaga.
Waxaa kaa baadhi karaa STI yada iyo HIV dhakhtarkaaga guud ama adeega caafimaadka bulshada dad waynaha (GGD). Miyay jiraan khataro STIyada ah? Haddii aad buuxiso xaalado qaar ah waxaad iska baadhi kartaa bilaash xaga adeega caafimaadka bulshada dad waynaha (GGD) ee aagaaga. Dadka dhalinta yar ilaa 25 sanado jir, shaqaalaha galmada, raga galma la sameeya raga iyo dadka ka yimid wadamada STI ay si aad ah ugu badantahay waxay ka samaysan karaan ballan adeega caafimaadka dad waynaha ee degmadda (GGD) oo waxaa lagu baadhaa bilaash.
Waxaa sidoo kale ku baadhi kara dhakhtarkaaga guud. La tashigaaga dhakhtarka guud waa bilaasha, laakiin wakhtiyada qaarkood waa inaad iska bixisaa baadhitaanka. Tani waxay ku xidhantahay caymiskaaga caafimaad iyo xad dhaafka caymiskaaga caafimaad (eigen risico). Waydii adeeg bixiyahaaga caymiska macluumaad dheeraad ah.
Haddii aad ku nooshahay xarunta magan galyada waxaad booqan kartaa xaruntaada caafimaada halkaa wixii ah baadhitaanka bilaashka ah ee STI.
Mowduuyo badan oo la xidhiidha Baadhida HIV